စာဖတ်တတ်ခါစ ကလေးတွေကို ပေးဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်း (၃) အုပ် – For her myanmar
စာဖတ်တတ်ခါစ ကလေးတွေကို ပေးဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်း (၃) အုပ်
Posted on April 26, 2019 Author Stella	Comment(0)
နုနယ်တဲ့ဦးနှောက်လေးတွေထဲ အတွေးအမြင်ကောင်းတွေ ရောက်စေဖို့
ယောင်းတို့ရေ … Stella တို့ ငယ်ငယ်ကဆို အပန်းဖြေစရာဆိုလို့ စာအုပ်ဆိုင်ပြေးပြီး ကာတွန်းစာအုပ်တွေ၊ ဝတ္ထုစာအုပ်တွေ ငှားဖတ်ရတာလောက်ပဲ ရှိခဲ့တာလေ။ အခုခေတ်ကလေးတွေကတော့ ဖုန်းတွေ၊ tablet တွေနဲ့ ဂိမ်းမျိုးစုံဆော့လို့ရနေတော့ သူတို့လေးတွေဟာ ကျောင်းစာကလွဲပြီး အခြားစာပေတွေနဲ့ အထိအတွေ့မရှိသလောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီတော့ ယောင်းရဲ့သားသားမီးမီး ဒါမှမဟုတ် မောင်ညီမလေးတွေ၊ တူတူမလေးတွေကို စာဖတ်စေချင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဘယ်စာအုပ်တွေ ပေးဖတ်ရမလဲမသိဘူးဆိုရင်တော့ Stella ကတော့ ဒီစာအုပ်လေးတွေကို ပေးဖတ်စေချင်ပါတယ်။
(၁) သမီးဖတ်ဖို့ နှလုံးသားရှုမျှော်ခင်းများ – မောင်သာချို
ဆရာမောင်သာချိုရဲ့ “သမီးဖတ်ဖို့” ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ စာစုလေးတွေကို စိတ်ကူးချိုချိုစာအုပ်တိုက်က တစ်ပေါင်းတစ်စည်းထဲထုတ်ဝေပေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ ဒီစာအုပ်လေးကို Stella အသက်ဆယ်နှစ်ကျော်ကျော်မှာ အဖေကလက်ဆောင်ပေးလို့ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ရာကနေ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ခဏခဏဖတ်ဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။ ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ မပြောဘဲသိရမယ့် လူ့ကျင့်ဝတ်တွေအကြောင်း ဆရာမောင်သာချိုက သူ့အတွေ့အကြုံလေးတွေထည့်သွင်းပြီး ရေးထားတာကြောင့် ကလေးတွေအနေနဲ့ နားလည်လွယ်ပြီး အပြုအမူကောင်းတွေ၊ ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာနာတတ်တဲ့စိတ်အကြောင်းတွေကို သင်ယူနိုင်မှာပါ။ အဲ့ဒီနောက်မှာလည်း “စိမ်းလန်းသောမိသားစုများ” ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေး ဆက်လက်ထွက်ရှိထားပါသေးတယ်။
(၂) တိုင်းရင်းသားရိုးရာပုံပြင်များ – လူထုဦးလှ
လူထုဦးလှရဲ့ စာအုပ်တွေအမြောက်အမြားရှိတဲ့ထဲကမှ “တိုင်းရင်းသားရိုးရာပုံပြင်များ” စာအုပ်က မြန်မာနိုင်င်ငံက သွေးချင်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ လူနေမှုဘဝတွေ၊ အတွေးအမြင်တွေကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ မြင်တွေ့နိုင်တဲ့ ပုံပြင်စာအုပ်လေးပါ။ Stella ဒီစာအုပ်မဖတ်ဖူးခင်က တချို့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ နာမည်ကို ကြားတောင်မကြားဖူးခဲ့ပါဘူး။ ဗဟုသုတတွေ တစ်ပုံတစ်ပင်ပေးတဲ့ စာအုပ်လေးမို့ ကလေးတွေအတွက် သင့်လျော်တဲ့ စာအုပ်လေးပါပဲ ယောင်းရေ။
Related article >>> နာမည်ကျော်စာရေးဆရာတွေရဲ့ နာမည်တစ်လုံးဝတ္ထု (၃) ပုဒ်
(၃) မောင်ခွေးဖို့ကဗျာများ – မင်းသုဝဏ်
ငယ်ငယ်က နှုတ်ကမချနိုင်အောင် ရွတ်ခဲ့ရတဲ့ “ဝါဆိုဝါခေါင်ရေတွေကြီးလို့ သပြေသီးမှည့်ကောက်စို့ကွယ်” ဆိုတဲ့ကဗျာလေးကို မှတ်မိကြသေးလားဟင် ? ဒီကဗျာလေးအပါအဝင် ယောင်းတို့နဲ့မစိမ်းတဲ့ ကလေးကဗျာလေးတွေကို ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်ရဲ့ “မောင်ခွေးဖို့ကဗျာများ” စာအုပ်မှာ ဖတ်နိုင်ပါပြီ။ ကလေးတွေကို ဖတ်ပြရင်း ငယ်ဘဝကိုပါ ပြန်လွမ်းသွားလောက်ပါတယ်။ ဆရာကြီးရဲ့ကဗျာတွေက ကလေးကဗျာတွေဆိုပေမဲ့ ပြန်ဖတ်လိုက်မိတိုင်းမှာ သင်ယူစရာတစ်ခုခုတော့ ရစမြဲမို့ ကလေးရော လူကြီးပါ အချိန်မရွေးဖတ်နိုင်တဲ့ စာအုပ်လေးပါ။
ယောင်းရေ … ယောင်းတို့အနေနဲ့လည်း နောင်မျိုးဆက်သစ်လေးတွေကို အသိဉာဏ်တိုးပွားလာစေချင်မယ်လို့ Stella ထင်တဲ့အတွက် ဒီဆောင်းပါးလေးကို ရေးလိုက်တာဖြစ်လို့ ယောင်းတို့အတွက် အကျိုးရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒါဆို နောက်တစ်ပတ်မှ စာအုပ်အသစ်လေးတွေနဲ့ ပြန်လာခဲ့မယ်နော်။
နုနယျတဲ့ဦးနှောကျလေးတှထေဲ အတှေးအမွငျကောငျးတှေ ရောကျစဖေို့
ယောငျးတို့ရေ … Stella တို့ ငယျငယျကဆို အပနျးဖွစေရာဆိုလို့ စာအုပျဆိုငျပွေးပွီး ကာတှနျးစာအုပျတှေ၊ ဝတ်ထုစာအုပျတှေ ငှားဖတျရတာလောကျပဲ ရှိခဲ့တာလေ။ အခုခတျေကလေးတှကေတော့ ဖုနျးတှေ၊ tablet တှနေဲ့ ဂိမျးမြိုးစုံဆော့လို့ရနတေော့ သူတို့လေးတှဟော ကြောငျးစာကလှဲပွီး အခွားစာပတှေနေဲ့ အထိအတှမေ့ရှိသလောကျဖွဈနပေါတယျ။ ဒီတော့ ယောငျးရဲ့သားသားမီးမီး ဒါမှမဟုတျ မောငျညီမလေးတှေ၊ တူတူမလေးတှကေို စာဖတျစခေငျြတယျ၊ ဒါပမေဲ့ ဘယျစာအုပျတှေ ပေးဖတျရမလဲမသိဘူးဆိုရငျတော့ Stella ကတော့ ဒီစာအုပျလေးတှကေို ပေးဖတျစခေငျြပါတယျ။
(၁) သမီးဖတျဖို့ နှလုံးသားရှုမြှျောခငျးမြား – မောငျသာခြို
ဆရာမောငျသာခြိုရဲ့ “သမီးဖတျဖို့” ဆိုတဲ့ခေါငျးစဉျနဲ့ စာစုလေးတှကေို စိတျကူးခြိုခြိုစာအုပျတိုကျက တဈပေါငျးတဈစညျးထဲထုတျဝပေေးထားတဲ့ စာအုပျလေးပါ။ ဒီစာအုပျလေးကို Stella အသကျဆယျနှဈကြျောကြျောမှာ အဖကေလကျဆောငျပေးလို့ ဖတျဖွဈခဲ့ရာကနေ ဒီနဒေီ့အခြိနျထိ ခဏခဏဖတျဖွဈနတေုနျးပါပဲ။ ဒီစာအုပျထဲမှာတော့ မပွောဘဲသိရမယျ့ လူ့ကငျြ့ဝတျတှအေကွောငျး ဆရာမောငျသာခြိုက သူ့အတှအေ့ကွုံလေးတှထေညျ့သှငျးပွီး ရေးထားတာကွောငျ့ ကလေးတှအေနနေဲ့ နားလညျလှယျပွီး အပွုအမူကောငျးတှေ၊ ကငျြ့ဝတျတှနေဲ့ ကိုယျခငျြးစာနာတတျတဲ့စိတျအကွောငျးတှကေို သငျယူနိုငျမှာပါ။ အဲ့ဒီနောကျမှာလညျး “စိမျးလနျးသောမိသားစုမြား” ဆိုတဲ့ စာအုပျလေး ဆကျလကျထှကျရှိထားပါသေးတယျ။
Related article >>> မတူညီတဲ့ လူ့သဘာဝတှကေို လှလှပပပွသှားခဲ့တဲ့ စာအုပျကောငျး (၂) အုပျ
(၂) တိုငျးရငျးသားရိုးရာပုံပွငျမြား – လူထုဦးလှ
လူထုဦးလှရဲ့ စာအုပျတှအေမွောကျအမွားရှိတဲ့ထဲကမှ “တိုငျးရငျးသားရိုးရာပုံပွငျမြား” စာအုပျက မွနျမာနိုငျငျငံက သှေးခငျြးတိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ လူနမှေုဘဝတှေ၊ အတှေးအမွငျတှကေို တဈထောငျ့တဈနရောကနေ မွငျတှနေို့ငျတဲ့ ပုံပွငျစာအုပျလေးပါ။ Stella ဒီစာအုပျမဖတျဖူးခငျက တခြို့တိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ နာမညျကို ကွားတောငျမကွားဖူးခဲ့ပါဘူး။ ဗဟုသုတတှေ တဈပုံတဈပငျပေးတဲ့ စာအုပျလေးမို့ ကလေးတှအေတှကျ သငျ့လြျောတဲ့ စာအုပျလေးပါပဲ ယောငျးရေ။
Related article >>> နာမညျကြျောစာရေးဆရာတှရေဲ့ နာမညျတဈလုံးဝတ်ထု (၃) ပုဒျ
(၃) မောငျခှေးဖို့ကဗြာမြား – မငျးသုဝဏျ
ငယျငယျက နှုတျကမခနြိုငျအောငျ ရှတျခဲ့ရတဲ့ “ဝါဆိုဝါခေါငျရတှေကွေီးလို့ သပွသေီးမှညျ့ကောကျစို့ကှယျ” ဆိုတဲ့ကဗြာလေးကို မှတျမိကွသေးလားဟငျ ? ဒီကဗြာလေးအပါအဝငျ ယောငျးတို့နဲ့မစိမျးတဲ့ ကလေးကဗြာလေးတှကေို ဆရာကွီးမငျးသုဝဏျရဲ့ “မောငျခှေးဖို့ကဗြာမြား” စာအုပျမှာ ဖတျနိုငျပါပွီ။ ကလေးတှကေို ဖတျပွရငျး ငယျဘဝကိုပါ ပွနျလှမျးသှားလောကျပါတယျ။ ဆရာကွီးရဲ့ကဗြာတှကေ ကလေးကဗြာတှဆေိုပမေဲ့ ပွနျဖတျလိုကျမိတိုငျးမှာ သငျယူစရာတဈခုခုတော့ ရစမွဲမို့ ကလေးရော လူကွီးပါ အခြိနျမရှေးဖတျနိုငျတဲ့ စာအုပျလေးပါ။
ယောငျးရေ … ယောငျးတို့အနနေဲ့လညျး နောငျမြိုးဆကျသဈလေးတှကေို အသိဉာဏျတိုးပှားလာစခေငျြမယျလို့ Stella ထငျတဲ့အတှကျ ဒီဆောငျးပါးလေးကို ရေးလိုကျတာဖွဈလို့ ယောငျးတို့အတှကျ အကြိုးရှိမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။
ဒါဆို နောကျတဈပတျမှ စာအုပျအသဈလေးတှနေဲ့ ပွနျလာခဲ့မယျနျော။
Tagged authors, Books, Books review, Kids, writer
ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် သိချင်ကြသူတိုင်း ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်း (၁)အုပ်
Posted on October 27, 2018 October 27, 2018 Author Christina Rosy
ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးမှ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် သေချာသိသွားတော့တယ်..
Posted on December 21, 2018 December 21, 2018 Author Wathun
Book Reviews FUN
Posted on March 31, 2018 Author Hnin Ei Oo
Sensitive skin ပိုင်ရှင်လား ? ညအိပ်ရာမဝင်ခင် ဒီအဆင့် (၄) ဆင့်ကို လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ